भाग्यमानी छोरो – Part 43 – काठमाण्डौं फर्केपछी –2- Naughty Nepali
Home » Incest Sex Story » भाग्यमानी छोरो – Part 43 – काठमाण्डौं फर्केपछी – 2
काठमाण्डौं फर्केपछी – 2
चिया पिईसकेर म हाफ पेन्ट मात्र लगाएर बैठकमा आएँ अनि टि.भी. खोलेर रेस्लिङ्ग हेर्न थालें, रेस्लिङ्ग नहेरेको पनि लामो समय भईसकेको थियो । आमा माथीबाट प्लङ्ग लगाएर आउनुभयो र मसँग बस्दै दार्जिलिङ्गमा बहिनीको लागि किनिदिएको कपडाको पोको खोल्दै रुबीनालाई आवाज दिनुभयो । रुबीना “किन?” भन्ने आवाजका साथ हाम्रो सामु आईपुगी, आमाले उसलाई ल्याईदिनुभएको कपडा हातमा थमाउँदै भन्नुभयो “यो लगाएर हेर त मिल्छ कि मिल्दैन ?” मैले ठाडो प्रश्न तेर्साएँ “अनि नमिले त के नै गर्न मिल्छ र ? कि हजुरले लगाउनुहुन्छ आमा ?” रुबीनाले कपडाको पोका खोलेर एक-एक गर्दै हेरी बिशेष गरि ब्रा र पेन्टी जुन बढि नै सेक्सी खालका थिए, उसले आफ्नो कोठामा सबै लिएर गई अनि एकैछिनमा लगाएर आई ।
यतिखेर रुबीनाको शरिरमा लङ्ग नेटेड टि-शर्टभित्र पातलो माईक्रो थोङ्ग (जसमा बुब्स र पुती छोप्नको लागि सानो कपडाको पिस प्रयोग गरिएको हुन्छ) मात्र थियो, मेरो लाँडो त ठन्किईहाल्यो र म उठेर रुबीनालाई पछाडीबाट अँगालप हाल्दै आमातिर फर्केर भनें, “दाईको अगाडी बहिनीलाई यसरी कपडा लगाउन दिएपछी त म त बाँकि छोड्दिन त आमा… ?” आमाले पनि प्रत्युत्तरमा भन्नुभयो “तैलें कसलाई पो बाँकि छोडेको छस् र ?” आमाले त्यति भन्नासाथ रुबीनालाई आफुतिर फर्काएर बुब्सलाई च्याप्प हातमा मुठ्याएर खेलाउँदै भनें “आमाले नै नछोड भनेपछी त चिक्नै पर्*यो नि बैनी तँलाई त !” अनि रुबीनाको मुखमा मुख जोडेर किस मार्न थालें । आमाले “जे गर्ने हो कोठाभित्र गएर गरो जाओ ?” मैले आमालाई जिस्काउँदै भनें “कोठाभित्र त अघिनै गरेको अब त जे गर्नु छ यहीं गर्ने हो !” त्यसपश्चात: मैले कट्टुलाई तल सारेर ठन्केको लाँडो आमाको अनुहार अगाडी लैजाँदै फेरी भनें “लौ आमा बहिनीले त बिहानै चाखिसकी अब तपाईंको पालो !”
“के गर्छ यो, लगाई कपडा ! जाँ पायो त्यहीं चाहिने नचाहिने काम गर्छ !” रुबीनाले उक्सिदैं आमाप्रति भनि “बुढीमाऊ के को नखरा गर्नुहुन्छ अहिले हेर्ने बेलामा चाँही छोरासँगै बसेर ब्लु-फिल्म हेर्नी अनि अनि के के गर्नी अहिले नाटक !” त्यसपछी रुबीना घुँडा टेकेर भुईंमा बसेर मेरो लाँडो हातले समाएर आमाको ओंठमा दलिदिँदै भनि “आमा ! एकपटक चुस्नुस् न दादाको लाँडो मलाई नजिकबाट हेर्न मन लाग्यो !” अनि अर्को हातले आमाको प्लङ्गबाट बुब्स निकालेर खेलाईदिन थाली । आमाले हल्कासँग ओंठ खोल्नुभयो र मेरो लाँडोको टुप्पो आमाको मुखभित्र स्लो मोसनमा छिर्न थाल्यो, ऐन मौकामा मैले आमालाई भनें
“लाज मान्नु पर्दैन आमा ! यसलाई सबै कुरा थाहा छ, यहाँबाट इलाम जाँदा नै बुबासँग मेरो सम्झौता भा’थ्यो, काठमाण्डौ आईपुग्दा बुबाले हजुरको चाकमा चिक्ने माहौल बन्नुपर्दछ भनेर ! त्यसमाथी बुबा र मैले त रुबीनालाई अगाडी-पछाडीबाट बारम्बार चिकेकै हो ! अब अहिले बुबा खाना खान आउँदा हजुरलाई पनि हामी बाउ-छोरा दुबै जनाले मिलेर अगाडी-पछाडीबाट लाँडो चखाउने नै हो ! अहिले त मेरो लाँडोलाई रिफ्रेस मात्र हुने गरि चुसाउने हो हजुरलाई !” अनि आमाको दुवै गालामा समातेर लाँडोलाई आमाको मुखमा अघि-पछी गराउन सुरु गरें, आमाले आँखा बन्द गरेर मौन समर्थन जनाउँदै मेरो लाँडोलाई मुखमा लिनुभयो । आमाको मुखबाट लाँडो बाहिर निकालेर रुबीनाले पनि चुसी र आमाको ओंठमा ओंठ जोडेर चुम्बन पनि लिई ।
chikeko katha, chikeko nepali katha, chikeko nepali story, chikeko sex katha, chiyabari ma chikeko, erotic story nepali, inscest sex story, inscest story, iscest nepali sex story, lado chusi, lado puti ma, lado puti ma chikeko story, mam sanga chikeko, naango boobs, nepali chikeko story, nepali erotic story, nepali inscest story, nepali puti, nepali puti chikeko, nepali sex stories, nepali sex story, nepali sexy story, nepali sexy story nepali, Pallo Ghar Ko Neha Le Lado Chusi, puti chikeko, puti chikeko nepali, puti chikeko story, puti m, Stories chak chikeko katha, भाग्यमानी छोरो